Raha ny eto Madagasikara dia mbola lavitry ny afo ny kitay ary tena mbola ezaka be ny ahatrarana ny fahaleovantena ara-bola izany. Nanambara ny mpahay toekarena fa tsy maintsy miainga amin’ny fangaraharana amin’ny fitantanana ara-bola izany ary tsy maintsy ilaina ny tamberin’andraikitra ny tompon’andraikitra amin’ny fitantanambolam-panjakana sy ny fikirakirana ny vola rehetra mihodina eto. Ankoatr’izay dia tokony hazava hatrany ny tatitry ny fampidiram-bola rehetra an’ny fanjakana sy ny fitantanana izay mety ho trosan’ny firenena na ny anatiny na ny any ivelany. Nilaza ihany koa ny teo anivon’ny faribolan’ny mpahay sy ny mpandinika ny toekarena eto Madagasikara (CREM) fa tokony hofantarina marina ny tomban’ny harena anatin’ny firenena Malagasy, indrindra ireo harena anatiny tahaka ny andramena, ny solitany, ny volamena izay mampiavaka an’i Madagasikara. Omena ny vidiny sahaza izany ireo ary hiarahana miasa amin’ny Banky Iraisam-pirenena sy ireo mpiara-miombon’antoka ny fanatanterahana azy. Rehefa izay dia hanangana banky Malagasy na hanorina sehatra hafa tena hampidi-bola hiteraka fizakan-tena izay tena lehibe hanavotra amin’ny fandraharahana sy fampihodinana vola i Madagasikara.